I-Wholesale matte frosted inkambiso Glass reed diffuser ikhandlela Isitsha imboni nabakhiqizi |Winby
i-matte frosted custom Isitsha sekhandlela se-Glass reed
Umbala wothando onsomi we-matte frosted Glass ngokwezifiso Isitsha sekhandlela/ikhandlela Umkhumbi onezivalo
1. Le mbiza yekhandlela yenziwe ngengilazi efriziwe nesivalo se-bamboo, i-surfacetexture yinhle kakhulu.
2. Imbiza yekhandlela ingenziwa ngosayizi nombala ohlukile, siyazamukela izidingo zamakhasimende.
Usayizi: 6.2cm(Ububanzi)*8.1cm(Ubude) 8.2cm(Ububanzi)*9.8cm(Ubude) 10.2cm(Ububanzi)*13.1cm(Ubude)
izimbiza zengilazi ezineqhwa ezingenalutho zokuphatha amakhandlela
Ukwenza ngokwezifiso isitsha sekhandlela lengilazi elingenalutho
Lo mkhumbi wekhandlela lengilazi unobukhulu obuhlukene nemibala.Ungakhetha umbala ekhadini le-pantone.Kunjalo, singakunikeza isevisi yesampula.
Ungenza isitsha sekhandlela lengilazi yensika kanye nesitsha se-diffuser somhlanga njengesethi, futhi usebenzise ibhokisi lesipho ukupakisha, elingathuthukisa ikhwalithi kanye nebanga lomkhiqizo.
Izinzuzo zesitsha sekhandlela lengilazi
Futhi, le mbiza yekhandlela ifafazwe ngopende osekelwe emanzini.Ngakho i-eco-friendly futhi akudingeki ukhathazeke ngekhwalithi yayo.
Izitsha zethu zamakhandlela ezithengisa ingilazi ezishisayo ziye zadunyiswa kakhulu ngamakhasimende ethu futhi ziye zathengiswa emazweni amaningi nasezifundeni.
Usayizi D6.2CM*H8.1CM D10.2CM*H13.1CMM: D8.2CM*H9.8CM
Okubalulekile Inkomishi yengilazi efriziwe nesivalo se-bamboo
Isisindo 175g 225g 450g
Izimbiza zekhandlela lengilazi zingenziwa ngemiphumela ehlukene, njenge-matte, frosted, polished, spraying.Ungakhetha umthelela owuthandayo.Kunjalo, uma ufuna ukuphrinta ilogo yakho noma amalebula enkomishini yengilazi, nathi singakwenza.Udinga nje ukusithumela imiklamo yakho, singakwenzela ukuhumusha njengesithenjwa.
Nawa amanye amazwana amahle avela kumakhasimende ethu:
Okwedlule: Iwikhi yekhandlela likakotini ene-Paraffin Wax Coated
Olandelayo: Amathini ensimbi e-4OZ okuhlobisa okwenza amakhandlela
ikhandlela imbiza nge lid sokhuni
izitsha zamakhandlela ngokwezifiso
Isitsha sekhandlela se-Matte Glass
imbiza yekhandlela elinsomi
R05 220ml Isitayela semfashini nesilula i-tr enkulu...
R04 100ml Isitayela esilula esibonisa ngale umumo oyisicaba g...
Isitikha sika-R100 100ml sikanokusho sasendlini esingashisi...